Maldiva: Voampanga Ho Nampijaly Sy Namono Ho Faty Tovolahy Iray Ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2017 17:34 GMT
(Marihana fa efa nivoaka tamin'ny volana Martsa, taona 2007 ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Fampitandremana: mankany amin'ny tranonkala ahitana lahatsary sy sary mety manohina ny ankizy sy ny olona mora tohina ny rohin'ity lahatsoratra ity.
Miteny ho azy indray ny fampijaliana ao amin'ny fonjan'i Maldiva noho ny fahitàna vatana mangatsiaka tao anaty rano ary feno diana kapoka feno herisetra, tao Malé renivohitra ny marainan'ny 15 Aprily. Nogadrain'ny polisy andro vitsy talohan'ny nahafatesany ity tovolahy antsoina hoe Hussain Solah ity. Na dia nilaza aza ny polisy fa navotsotra izy ny 13 Aprily, tsy nisy vavolombelona nahita mihitsy izy nanomboka tamin'izany andro izany. Tsy nifandray tamin'ny fianakaviany na ny namany izy taorian'izany voalaza fa famotsorana azy izany.
Olona an'arivony no nanao fihetsiketsehana mba hanohitra izay nolazain'izy ireo fa farany tamin'ireo andiana vono olona nataon'ny polisy. Niharan'ny herisetran'ny polisy avy eo ireo mpanao fihetsiketsehana ary nodarohan'ireo andiana polisy sangany, izay voatsikera vao haingana tamin'ny tatitry ny mpitantana ny polisy teo aloha, izay Britanika [En, PDF]
Nodarohan'ny polisy tamin-kerisetra ihany koa i Mohamed Nasheed, filohan'ny antoko Demaokraty Maldiviana ary nosamborina. Navotsotra izy taty aoriana ary nangataka mba hitsabo tena any ivelany.
Nangataka “fandidiana ny maty” ny fianakavian'ny maty mba hamantarana ny anton'ny nahafatesany, saingy noezahin'ny polisy nalevina ilay vatana mangatsiaka. Nanolo-kevitra avy eo ny polisy mba ho atao ao Maldiva, ataon'ny dokotera mpandidy faty Sri-lankey ny “fandidiana ny maty”. Tsy misy fitaovana hanatanterahana fandidiana faty ara-dalàna ao Maldiva. Tsy nanaiky ny hanaovana ny fandidiana faty ao Maldiva araka ny fepetra napetraky ny polisy ny fianakaviana. Nanaiky ny fangatahan'ny fianakaviana ihany ny governemanta nony farany ary natao tany ivelany ny fandidiana ny maty.
Voalohany indrindra, nilaza ny polisy fa tsy nisy diana kapoka ny vatana mangatsiaka, saingy afaka manaporofo izany ireo olona an-jatony nahita dia-kapoka. Dokotera iray manana fanahiana nanoratra tao amin'ny bilaogy Maldives Health fa tsy nety nanasonia ny fahazoan-dalana handevina azy ny dokotera voalohany nizaha ny faty, ary nisisika izy mba hoentina any amin'ny hopitaly ny vatana mangatsiaka mba ahafahana manao fanadihadiana lalina kokoa.
“Ny zava-misy dia tsy nety nanasonia ny fahazoan-dalana handevina ilay dokotera voalohany nizaha ny faty, ary nisisika mba ho entina any amin'ny IGMH [hopitaly foibe] ny faty ahafahana manao fizahana lalina kokoa hamantarana ny anton'ny ratra. Fanapahan-kevitra tsara ankasitrahana izany, indrindra amin'ny toe-java-sarotra tahaka izao. Izany no tokony atao.
Tsy nanao fizahana taorian'ny fahafatesana ireo dokoterantsika satria tsy azo atao izany. Ny olana hafa dia tsy manana dokotera manana fahaiza-manao ilaina hanatanterahana izany dingana izany isika (tsy ny mpitsabo nify no hanaisotra ny kambon-tsinay be (appendice) anao, sa tsy izany?)”.
Mitaraina ny Maldives Today [En] noho ny fihetsika tsy rototra hita amin'ny vahoaka manoloana ny famonoana an'i Solah, indrindra raha oharina tamin'ny fitroarana tamin'ny volana Septambra 2003, izay nateraky ny famonoana gadra nataon'ny mpitandro filaminana.
15 Oktobra 2018Fahalalahàna miteny